ओठ वा जिब्रोमा घाउ आएको छ ? यसो गर्नुस् चाँडै निको हुन्छ ! – ramechhapkhabar.com
ओठ वा जिब्रोमा घाउ आएको छ ? यसो गर्नुस् चाँडै निको हुन्छ !
प्रायजसो धेरै मानिसहरुको मुख,जिब्रो तथा ओठहरुमा साना साना बिबिरा, फोकाफोकी आइरहने हुन्छ । यो समस्य धेरैले भोग्ने समस्या हो । कसैको जिब्रोमा त, कसैको ओठ, कसैको गिजामा यो घाउ आउने गर्छ । जसले गर्दा खाना खान, बोल्न समेत समस्या हुने, साथै लगातार दुख्ने, पोल्ने, ज्वरो आउने, घाटीको ग्रन्थि सुनिने, दुख्ने समस्या पनि निम्तिन सक्छ ।
किन आउँछ घाउ ?
विशेष गरि शरीरमा पोषणको कमी भिटामिन बी,सी,आइरन तथा प्रोटिनको कमीले मुख,ओठ, तथा जिब्रोमा घाउ आउने गर्छ । त्यस्तै खाद्य विषाक्तता,सुर्ति,पानमसला, मद्यपान, र धुम्रपानका कारण ब्याक्टेरिया तथा फङगसको संक्रमण, बढि तातो र मसला, बढि अम्ल भएको खान पानको कारणले पनि मुख, ओठ, जिब्रोमा घाउ आउँछ ।
समधान गर्ने उपायहरु:
-प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने । तर बढि चिसो वा तातो नपिउने । -फलफूल तथा साग सब्जी चपाएर खाने । -मनतातो पानीमा पिटकिरी मिसाएर दिनमा कम्तीमा पनि ३ पटक कुल्ला गर्ने । – चिल्लो पदार्थ बढि मात्रामा नखाने । -बिहान-बिहान उम्रको गेडागुडी खाने । -घाउ भएको ठाउँमा मह लगाउने ।
-निमको पात चपाउने । -बदाम भिजाएर खाने । -पानीमा तुलसीको पात राखेर कुल्ला गर्ने । यसका साथै बाराम्बार समस्या भैइरहेमा चिकित्सकलाई देखाउने । किनकि विभिन्न रोगका कारण पनि मुख, जिब्रो तथा ओठमा घाउ आउने सक्छ ।